Anosizato : Lakana navesatra loatra, lehilahy iray maty
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → mars → 22 → Anosizato : Lakana navesatra loatra, lehilahy iray maty
Mpaka fasika iray no maty an-drano ny zoma maraina teo. Telo lahy izy ireo no niray lakana mikarama mampiakatra fasika sy biriky. Tsy fantatra marina fa araka ny fitantaran’izy roa lahy namany dia navesatra laotra ireo biriky teo ambonin’ny lakana ka tsy zaka intsony. Nilentika ilay lakana ary efa somary nahazo ampovoan-drano, amin’ny reniranon’Ikopa iny. Nony efa samy nahita izy telo lahy ireto fa rendrika ity lakana dia samy nitsoraka namonjy ny ainy.
Samy nanao izay ho afany izy telo lahy ka ny roalahy no tafita soa aman-tsara tety amorony fa ilay raika lahy kosa tsy nipoitra intsony. Nanao izay ho afany izy roa lahy saingy niala maina. Nanapa-kevitra izy ireo tamin’izany ny hiantso ny mpamonjy voina. Vetivety ihany moa dia tonga teny an-toerana ireo mpamonjy voina ka avy hatrany dia nirobo-drano nanao ny fikarohana, folo minitra tao aoriana dia hita ilay rangahy efapolo taona, saingy indrisy efa tsy misy aina intsony.
Nandramana natao daholo moa ny famonjena rehetra saingy tsy avotra intsony ny ain’ity farany. Avy hatrany moa ny tompon’andraikitra teo an-tanana dia niantso ny dokotera tao amin’ny CSBII sy ny zandary teny an-toerna mba hizaha ny razana. Natolotra ny fianakaviany moa ny razana nony avy eo. Marihina fa mpiavy mikarama ihany ity lehilahy ity fa avy any lavitra no fiaviany ary nonina tao Anjanamaitso-Ampitatafika.
Mahery tokoa ny rano amin’izao sady miakatra ka anentanana ny mpampiakatra fasika sy biriky mba hitandrina fa ny tsy fahamailoana kely fotsiny ihany dia mety hamoizana aina.